Indlu enoxolo - I-Airbnb
I-91% yeendwendwe zakutshanje inike uAlison iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu esemaphandleni etofotofo, eNormandy, enefenitshala etofotofo nesitovu esivuthayo. Ngaphandle yigadi encinci enethala elijongene nomzantsi. Ibekwe kwindawo yasemaphandleni apho ipholile kwaye ithule. Ime ngentla kwedolophu encinci enazo zonke izinto ezinokusetyenziswa. Ilungiselelwe ukutyelela idolophu, unxweme, ilizwe, iindawo zembali, iinqaba, iimarike, ukungcamla ukutya kwaselwandle, itshizi kwaye ungalibali ukungcamla i-cider eveliswe ekuhlaleni. Ukuba wedwa okanye iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi: kukho into elungiselelwe wonke umntu wobudala nomdla.
Le ndawo inefenitshala etofotofo, ineendawo ezininzi zokuhlala ezijikeleze i-log burner, kukho itafile enkulu yokutyela nekhitshi elinento yonke. Amagumbi okulala atofotofo phezulu kunye negumbi leshawa ezantsi. Igadi ebiyelweyo esemazantsi nefenitshala yasegadini neendawo zokuphumla ezinokusetyenziswa ziindwendwe kuphela. Indawo yokupaka eseyadini ene-wifi entle. Ii-log ziqukiwe kwindawo yokuqeshisa.
Le ndlu isendaweni ekuthiwa yi-hamlet enezindlu ezimbalwa ngaphezu kwedolophu encinci yaseMortain, eneevenkile zokutyela ezimbalwa, ipuli ephandle ehlotyeni. Ayingu ‘abakhenkethi' kodwa inayo yonke into onokuyidinga. Yindawo yasemaphandleni kodwa ayikho kude ibe kulula ukuyifikelela yonke into enokunikwa uNormandy. Ukubona iindawo ezintle, iindlela ezingenanto, iidolophu ezintle kunye neelali. Iikhilomitha eziyi-40 ukusuka eLe Mont Stinois enokubonwa ngosuku olucacileyo ukusuka kwindawo ebonakala kakuhle ukusuka kwindlu esemaphandleni. Imizuzu eyi-20 ukusuka kwimarike entle kaLwesithathu eSt Hilaire Du Harcouet. Hlala kwi-terrace kunye newayini, itshizi kunye ne-baguette umamele iintaka, iinyosi, iinkomo kunye neegusha ezikufutshane, ubukele umhlaba uhamba ngokuthe ngcembe kwaye uphole ngokupheleleyo.
Sinabantu abakhathalayo abangesiNgesi kodwa abahlala kufutshane. Ngaphandle kokuba kuyimfuneko, awuzukuphazamiseka ngabo, baya kuya ekunciphiseni ingca ngamaxesha athile ehlotyeni kodwa badla ngokuyifaka le nto kufutshane neendwendwe ezihlala eNgilani kodwa zinokuqhagamshelana nazo ukuba kuyimfuneko.
Sinabantu abakhathalayo abangesiNgesi kodwa abahlala kufutshane. Ngaphandle kokuba kuyimfuneko, awuzukuphazamiseka ngabo, baya kuya ekunciphiseni ingca ngamaxesha athile ehlotyeni…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mortain